IKWU OKWU NOTEPAD ++ - ESI MEE - 2019
Mmemme a bụ ihe mgbagwoju anya, ihe nrụgide, na mgbe niile, nke ọ na-abụghị ihe ọhụrụ ịmeghachi otu, ma ọ bụ ihe yiri ya. Iji mee ka ịchọta ma gbanwee ọchụchọ ahụ ma dochie ihe ndị yiri ya na akwụkwọ, a na-emepụta usoro nkwupụta oge niile na mmemme. Ọ na-ewepụta oge na mgbalị nke ndị mmemme, webmasters, na, mgbe ụfọdụ, ndị nnọchianya nke ọrụ ndị ọzọ. Ka anyị chọpụta otú a na-esi jiri okwu ọ bụla mee ihe na nchịkọta ederede dị elu Notepad ++.
Bịa nbudata ọhụrụ nke Notepad ++
Echiche nke okwu mgbe nile
Tupu ịmalite ọmụmụ banyere iji okwu mgbe niile na usoro ihe omume Notepad ++, ka anyị mụtakwuo ihe dị mkpa nke okwu a.
Okwu mgbe niile bụ asụsụ ọchụchọ pụrụ iche, na-eji nke ị nwere ike igosi ụdị dị iche iche na ederede akwụkwọ. A na-eme nke a site n'enyemaka nke ndị metacharacters pụrụ iche, na ntinye nke nyocha na mkpochapụ nke nhazi na ụkpụrụ nke usoro. Dịka ọmụmaatụ, na Notepad ++, ntụpọ dị n'ụdị nkwupụta oge niile na-anọchite anya nke ọ bụla n'ime ihe odide ndị dị ugbu a, okwu ahụ [A-Z] na-anọchi anya isi akwụkwọ edemede nke mkpụrụedemede Latịn.
Nkwupụta okwu mgbe nile nwere ike ịdị iche na asụsụ dị iche iche nke mmemme. Notepad ++ na-eji otu okwu nkwupụta oge ahụ dị ka asụsụ Perl na-ewu ewu.
Ụkpụrụ nke okwu onye ọ bụla
Ugbu a, ka anyị mara nke ọma mgbe niile na usoro ihe omume Notepad ++:
. - otu agwa;
[0-9] - ihe ọ bụla dị ka nọmba;
D - ụdị ọ bụla ma e wezụga nọmba;
[A-Z] - isi akwụkwọ edemede isi nke mkpụrụedemede Latịn;
[a-z] - mkpụrụ edemede ọ bụla nke mkpụrụ akwụkwọ Latịn;
[a - Z] - nke ọ bụla n'ime mkpụrụ akwụkwọ mkpụrụedemede Latin, n'agbanyeghị ikpe ahụ;
w - leta, gosi ma obu ndetu;
s - ohere;
^ - mmalite nke akara;
$ - njedebe nke akara;
* - ikwughachi ihe nnọchiteanya (site na 0 ruo mgbe ebighị ebi);
4 1 2 3 bu nhazi usoro nke otu;
' s * $ - chọọ nchapu efu;
([0-9] [0-9] *.) - chọọ ihe abụọ.
N'eziokwu, enwere ọtụtụ ọnụ ọgụgụ ndị na-ekwupụta mgbe nile, nke a na-apụghị ịchọta na otu isiokwu. Ọtụtụ ihe dịgasị iche iche nke ndị mmemme na ndị na-eme weebụ na-eji mgbe ha na-arụ ọrụ na Notepad ++.
Ojiji nke okwu mgbe niile na usoro ihe omume Notepad ++ mgbe ị na-enyocha
Ugbu a, ka anyị leba anya n'ihe atụ ụfọdụ nke otu esi eji okwu eme ihe na Notepad ++.
Iji malite ịrụ ọrụ mgbe niile, gaa na "Search" ngalaba, na na listi na-egosi, họrọ ihe "Chọta".
Tupu anyị mepee windo nchọpụta ọkọlọtọ na usoro ihe omume Notepad ++. Enwere ike ịnweta window a site na ịpị igodo nchikota Ctrl + F. Jide n'aka na ịmegharị bọtịnụ "Ikwu okwu" iji nwee ike ịrụ ọrụ na ọrụ a.
Chọta nọmba niile dị n'ime akwụkwọ. Iji mee nke a, tinye nchịkọta [0-9] na nyocha ahụ, wee pịa bọtịnụ "Search Next". Oge ọ bụla ị pịrị na bọtịnụ a ga-egosipụta ọnụọgụ na-esote dị na akwụkwọ ahụ site na elu ruo na ala. Ịgagharị na ọnọdụ ọchụchọ site na ala elu, nke nwere ike ime mgbe ị na-eji usoro ọchụchọ ahụ, enweghị ike itinye n'ọrụ mgbe ị na-arụ ọrụ na nkwupụta oge niile.
Ọ bụrụ na ị pịa "Chọta ihe niile dị na bọtịnụ ugbu a", niile nsonaazụ ọchụchọ, ya bụ, okwu njiriri na akwụkwọ, ga-egosipụta na windo dị iche.
Ma ebe a bụ nsonaazụ ọchụchọ gosipụtara akara site na akara.
Na-agbanwe ihe odide na okwu mgbe niile na Notepad ++
Ma, na usoro Notepad ++, ị nwere ike ọ bụghị naanị ịchọ ihe odide, kama na -emegharị ha site na iji okwu mgbe niile. Iji malite ihe a, gaa na "Ndochie" taabụ windo ọchụchọ ahụ.
Ka anyi weputa ntughari ndi ozo site na redirect. Iji mee nke a, na "Chọọnụ" kọlụm, tinye uru "href =. (// [^ '") *), na "Dochie" ubi - "href =" / redirect.php? To = 1 ". Pịa bọtịnụ "Dochie niile".
Dịka ị pụrụ ịhụ, nchigharị ahụ nwere ihe ịga nke ọma.
Ugbu a ka anyị tinye nyocha ahụ site na iji dochie anya site na iji okwu mgbe niile maka arụmọrụ ndị na-abụghị ndị mmemme kọmputa ma ọ bụ mmepe nke ibe weebụ.
Anyị nwere ndepụta nke mmadụ na usoro nke aha zuru ezu na ụbọchị ọmụmụ.
Weghachite ụbọchị ọmụmụ na aha ndị mmadụ. Maka nke a, na kọlụm "Chọta" anyị dee "( w +) ( w +) ( w . D " D +) ", nakwa na kọlụm" Dochie "-" 4 1 2 " . Pịa bọtịnụ "Dochie niile".
Anyị gosipụtara omume kachasị mfe a ga-eme site na iji okwu mgbe niile na usoro Notepad ++. Ma site n'enyemaka nke okwu ndị a, ndị mmemme na-arụ ọrụ dị mgbagwoju anya.